काठमाडौं । विशेषत मुद्राको कारोबार वा लेनदेन गर्ने गरी प्रचिलत कानुन बमोजिम संगठित संस्थालाई बैंक भनिन्छ । प्रयोगात्मक नेपाली शब्दकोश २०६१ मा चाहेको बेला झिक्न पाउने गरी राखिदिने ब्याजमा ऋण दिने आदि आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थालाइ बैंक भनिएको छ ।
आफ्नो धनराशीको उचित सुरक्षा तथा बैंकवाट ब्याज लिने हेतुले बैंकमा धनराशी जम्मा गरिने गरिन्छ । जनताले आफूले बैंकमा जम्मा गरेको धनराशी पुर्व निर्धारित बैंकिङ नियम पुरा गरि निकाल्न र पुनः राख्न पनि सक्दछन् ।
बैंक सम्बन्धी विषय यहाँ किन राखियो ? भन्नेबारे तपाईंले तल पढेपछि मात्र थाहा पाउनुहुनेछ । कुनै बैंक यस्ता पनि छन् आफ्नो कर्तुतहरु ढाकछोप रोक्न विज्ञापन दिएर फकाउने गर्छन् । जसमध्ये पर्छ एक नाम चलेको एनआईसी एसिया बैंक । जसले आफ्नो कर्तुत ढाकछोप गर्न मिडिया हाउसहरुलाई फकाउँदै आइरहेको स्रोत बताउँछ ।
केही समयअघि एनआईसी एशिया बैंकको स्वीफ्ट ह्याक भएर करोडौं रुपैयाँ तलमाथि हुन पुग्यो । यस्ता घटना बढ्दै गर्दा नेपालका बैंकको स्वीफ्ट प्रणाली कति सुरक्षित छ भन्ने चासो यतिबेला पनि सर्वत्र छ । त्यस्तै पछिल्लो समय एनआईसी एशिया बैंकको अर्को बदमासी पनि बाहिर आएको छ । ओरेण्टल सहकारीको लगानी रहेको धापासीस्थित २६ रोपनी जग्गामा एनआइसी एशिया बैंकले कब्जा गरेको बदमासी बाहिर आएको हो ।
यस्तो छ बदमासी ?
ओरेण्टल सहकारीका निक्षेप कर्ताहरुले सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेप रकम सुधिर बस्नेतले अपार्टमेन्ट निर्माणमा लगानी गरेका थिए । सो अपार्टमेन्ट निर्माणका लागि बस्नेतले धितो राखेको २६ रोपनीको अर्बौं पर्ने जग्गामा एनआईसी एशिया बैंकले कौडीको भाउमा कब्जा गर्न खोजेको ओरेण्टल पिडितहरुले आरोप लगाएका छन् ।
पहिले धितो राख्दा खाली जग्गा मात्रै भएपनि अहिले धेरै पूर्वाधार ठूला– ठूला विल्डिङहरु निर्माण भैसकेको र अब उक्त जग्गालाई अर्बौं पर्छ । तर उक्त जग्गाको पुन मुल्यांकन नगरी कौडीको भाउमा हड्पन खोजेको पिडितहरुले आरोप लगाएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले चिठ्ठी काट्दा समेत एनआईसी एशिया बैंकले उक्त निर्देशन नमान्नुमा राष्ट्र बैंकको पनि मिलोमतो भएको पिडितहरुले आशंका गरेका छन् ।
हाल सबै पिडितहरु मिलेर त्रिपक्षीय सम्झौता गरेको र एकपटक सबै पिडितहरु मिलेर सम्बन्धित निकाय धाउने तर यति प्रयास गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएमा सबै पिडितहरु मिलेर सडक संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने सहकारी पिडित हकहित सँंरक्षण समितिकी अध्यक्ष कुन्ती पोखरेलले जानकारी दिइन् ।
(थप ‘डकुमेन्ट’ चाहिएमा हामीसँग सुरक्षित छ ।)